Manchester United ayaa ku biirtay liiska kooxaha Premier League ee la kulmay viruska Corona.
Warbixintii ugu dambeysay ee toddobaadlaha ah ee Premier League ayaa muujineysa in tirada ciyaartoyda cudurka ku dhacay ay kala bar noqdeen, laakiin warbixin kale oo naxdin leh ayaa ka timid EFL, oo ​​sheeganeysa 112 ciyaartoy oo Championship ah. , League One iyo League Two oo cudurka ku dhacay.
Manchester City ayaa ahayd dhibbanayaasha ugu badan ee cudurkan usbuucii la soo dhaafay maaddaama tobaneeyo ka mid ah xiddigooda xiddigtu ay joogeen guryahooda, laakiin ciyaartii Aston Villa ee ay Liverpool la dheeleen caawa ee FA Cup-ka ayaa shaaca ka qaaday in ilaa toban ciyaartoy oo kooxda koowaad ah uu ku dhacay cudurka. dhacay.
Manchester United ayaa noqotay kooxdii ugu dambeysay ee shaacisa in Korona Fayras uu ku soo dhex dhuuntay xaruntooda tababarka, iyadoo warbixin la soo saaray ay sheegeyso in da’yarka Facundo Pellistri laga helay cudurka.
19 jirkaan oo tababar la qaadanayay kooxda koowaad labadii isbuuc ee la soo dhaafay, lana filayay inuu ka qeyb galo kulanka FA Cup ee Sabtida ay la ciyaarayaan Watford ayaa la xaqiijiyay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo 10 maalmood ah.
Xiddiga reer Uruguay ayaa noqon doona ciyaaryahankii seddexaad ee Manchester United ah ee la il daran cudurkaan ka dib Paul Pogba iyo Alex Telles, kuwaasoo soo kabsaday bishii December.
Tababare Ole Gunnar Solskjaer ayaa faallo ka bixiyay fayraska Facundo Pellistri: “Waxaan u maleynayaa inaan dhamaanteen raacno tilmaamaha caafimaadka, sidii aan horeyba u sameyn jirnay. “Waxaan la kulanay kiis xun oo ah Facundo Pellistri,” ayuu ku yiri bartiisa Twitter-ka. Waxaan rajeyneynaa inuu dhakhso u soo kabto. ”
Pellistri, oo ay saxeexday Manchester United intii lagu jiray xagaagii, ayaa u diray kooxdii da ‘yarta ee U23 halkaas oo uu ka ciyaaray, laakiin wuxuu la tababbaray kooxda waayeelka ah.
Zidane ayaa ku dhawaaqay xidigo